dilka isku dayay ee Donald Trump | Apg29
dhadhaminta Trump xanuunsan dhacay si lama filaan ah ka dib markii la sumeeyay.
Dhakhaatiirta ayaa helay dhadhamin sun in uu yahay mid aad u adag in la ogaado oo ay leeyihiin calaamado la soo daahay ah.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump booqday isbitaalka iyagaan isasii sheegin meesha baarka dhowr ayaa la geeyay isaga ka dib markii dhadhaminta uu bilawga deg deg ah ee lagu sumoobo.
kuugga Head waa madaxweynaha ee G dareenka
Inta lagu jiro maamulka Clinton ah, ayaa loo magacaabay kuugga madaxa at "sameeyayaal cunto Madaxweynaha," sida uu sheegay madax sare hore ee Aqalka Cad ee Walter Scheib.
Waxa xiiso leh, Scheib sheegay in mararka qaarkood habka ugu nabad badan cuntada u adeegaan madaxweynaha waa in "oo kaliya in wax lagu kaydin jiray oo dukaanka la joogo ee la soo dhaafay tagaan." Waxaa sharxi karaa penchant Trump ee cuntada si dhakhso ah.
isku day kale oo lagu sumoobo
Ilo ee Aqalka Cad ayaa sheegay in Alex Jones in uu isku day kale oo lagu sumoobo ka dhanka ah madaxweynaha ka hor.
Taariikh ahaan, waqtiga guurka daahiyaan ka mid ah gacankudhiiglayaasha sababta oo ah awoodda ay u leeyihiin in ay ka gudbaan sameeyayaal cuntada iyo baaritaano kale kiimikada sameeyay on cuntada caan ka hor intaan la cunin.
Madaxweynaha ma muujiyaan wax calaamado dibadda ah isagoo buka, laakiin waxa uu ahaa, si kastaba ha ahaatee, taxane ah oo baadhitaano isaga taxadar ahaan.
Aqalka Cad il: Trump booqasho isbitaalka la filayn in baaritaan lagu sumoobo ula kac ah. imtixaanka Cuntada markii ugu horaysay la cararay isbitaalka, iyo dhakhtarradu ka qabaan, waxaa jiray gaadhista in ay sun waqti dib loo dhigo